Hehsiis qodobo ka kooban oo laga gaarey Doorashada maamulka Galmudug [AKHRISO]
Cadaado- Kulan dhexmarey wafdigii uu hogaaminayey Wasiirka arimaha gudaha dowlada Federaalka Cabdi Farah Siciid oo kulamo la qaatey 24 Saac ee la soo dhaafey gudoonka Barlamanka Galmudug, guddiga Doorashada maamulkaas iyo odey dhaqameedyo ayaa waxa kasoo baxay qodobo wax looga qabanayo khilaafka u dhexeeya mamaulkaas iyo ururka Ahlu Sunah wal Jamaca.
Qodobadaan oo la xiriira xiliga Doorashada dhaceyso iyo kulan dhexmaraya dhinacyada isku haya dhismaha maamulkaan ayaa ka koobnaa qodobada hoos ku qoran kuwasoo qeexaya Jadwalka Doorashada Madaxweynaha ee maamulka Galmudug.
* Doorashada Madaxweyna Galmudug waxa la isla gartay inay dhacdo 30 bisha April.
* 10ka ilaa 17ka April waxaa Muqdisho ka dhici doona wadahadal loo furayo Galmudug iyo Ahlusuna Waljamaaca.
*In 25 illaa 30 April waxaa la diyaarin doona doorashada
*30ka April waxaa loo qorsheeyay inay dhacdo doorashada Madaxweynaha.
Wafdiga Wasiirka hogaaminayo ayaa la filayaa in maanta dib ugu noqon doonaan magalaada Muqdishu.
Dadka siyaasda la socda ayaa aaminsan guusha uu ka gaarey Wasiirka arimaha gudaha dib u dhigista Doorashada iyo in kulan isugu yimdaan Galmudug Ahlu Sunah sababtey madaama dhinacyada arintaan khuseeyso u arkaan Mudane Juxa iyo Ra'isal wasaare Khayre iney dhexdhexaad ka yihiin khilaafka u dhexeeyey in muddo ah dhinacyadaan.
Madaxweynaha Galmudug oo lagu doortay Cadaado
Soomaliya 03.05.2017. 13:19
CADAADO, Somalia- Xildhibaanada Barlamanka maamulka Galmudug ayaa doortay Madaxweynaha maamulkaas kadib loollan adag oo ka dhacay xarunta KMG ee Cadaado.
Doorashada oo ay ku tartameen saddex murashax ayaa wareegii Labaad waxaa u gudbay Labo mudane oo kala &nbs ...
Doorashada Galmudug: Labo Murashax oo u gudbay Wareegga 2-aad
Soomaliya 03.05.2017. 12:20
Somalia: Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Somalia oo tagay Cadaado
Soomaliya 02.05.2017. 19:26
Wasiirka arimaha gudaha Federaalka oo ka hadlay wadahadalka Ahlu Sunah iyo Galmudug
Soomaliya 27.04.2017. 21:54
Madaxda ururka Ahlu Sunah Wal Jamaca oo soo gaarey Muqdishu
Soomaliya 16.04.2017. 20:13
Juxa oo Galmudug ku qanciyay in dib loo dhigo Doorashada
Soomaliya 08.04.2017. 11:36
Wasiirka arimaha gudaha dowlada Federaalka oo gaarey magalaada Cadaado [ DAAWO]
Soomaliya 07.04.2017. 20:37
Galmudug “Diyaar ayaan u nahay inaan la hishiino Ahlu-Sunna”
Soomaliya 04.04.2017. 11:08